ỌR CAYMAN: Nwelite na COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » ỌR CAYMAN: Nwelite na COVID-19
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Cayman Islands • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Nnukwu Cayman (GIS) - E nwere nsonaazụ asatọ dị mkpesa n'oge taa (22 Eprel 2020) COVID-19 nchịkọta akụkọ.
Onye Gọvanọ Gọvanọ kwupụtara ọkwa ụgbọ elu ọzọ na-aga Miami ga-eme na Fraịde, 1 May wee kọwaa mkparịta ụka na-eso ndị ọchịchị mpaghara anọ na ise ndị ọzọ na-aga n'ihu.
Onye isi, Hon. Alden McLaughlin kwuru na nnọkọ onye omebe iwu nke taa mere ka ọ bụrụ na Gọvanọ kwadoro ya, nzukọ nzukọ ga-eme echi.
N'ikpeazụ, Mịnịsta Ahụike mere akara ncheta nke iri ise nke Earthbọchị withwa site na nchịkọta nke mmemme ndị a na-eme iji lụso mgbanwe ihu igwe na agwaetiti Cayman.
Onye nlekọta ahụike Dr John Lee kọrọ, sị:
Nsonaazụ ọjọọ 8 kọrọ; A na-edozi ihe nlele 150 ugbu a n'oge nkowa nchịkọta akụkọ na nsonaazụ 700 ka na-echere. A na-ebute 80 n'ime ndị a ụzọ, gụnyere ihe dị ka 50 bụ ndị bịarutere n'ụgbọ elu British Airways na gburugburu 30 ndị ọzọ maka ebumnuche ahụike.
Onu ogugu ndi mmadu nke ekwuru na ha bu ihe ojoo / asymptomatic bu otu, ma ndi mmadu ndi na-ata ahuhu na-adi nma, tinyere ndi mmadu.
Echi na 2 elekere, na nnọkọ ndekọ na ọwa gọọmentị Facebook na Twitter, ndị dibịa atọ sitere na HSA, Health City na Hospitallọ Ọgwụ Dọkịta ga-atụle ma zaa ajụjụ ndị mgbasa ozi na COVID-19: otu esi eweta na ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-ere ọkụ elu. A ga-agbasa nnọkọ ahụ na CIGTV na elekere asatọ nke mgbede, na-esote nzukọ Mgbakọ Iwu.
Kọmishọna ndị uwe ojii, Maazị Derek Byrne kọrọ, sị:
Enweghị nsogbu dị mkpa nke ụdị uwe ojii na abalị na mpụ na-adịgide adịgide.
Ejiri nsogbu 21 mere na Cayman Brac n'otu ntabi anya, na-akọ akụkọ mmebi abụọ, bụ ndị dọrọ aka na ntị maka ịgba akwụkwọ. Na Grand Cayman n’otu ntabi anya, e gbochiri ụgbọala 231 ma ọ dịghị onye chọtara imebi; iche iche ndị na-aga ụkwụ abụọ na otu onye na-agba ịnyịnya ígwè ndị uwe ojii kwụsịrị ma dọọ ha aka na ntị maka ikpe maka ịda iwu nke oge mbata.
Kemgbe elekere isii nke ụtụtụ taa, achọtara mmadụ atọ mebiri ebe ndobe iwu (otu na-azụmaahịa na-enweghị ikike na abụọ nọ n'ụgbọala na-enweghị ebumnuche iwu kwadoro); ha atọ nwere tiketi.
Trugbọ ala na-agba ọsọ na-aga n'ihu na-akpata nsogbu; nnukwu ihe mberede mere na mpaghara ọwụwa anyanwụ n'ụtụtụ a. Onye ọkwọ ụgbọ ala a na-atụ anya na ọ ga-agbake, mana ọ nwere mmerụ ahụ dị oke njọ.
A kọwokwa ọsọ ọsọ na Spotts Newlands, West Bay na Esterley Tibbetts Highway. Kọmishọna gwara ndị mmadụ ka ha biko wetuo obi iji zọpụta ndụ.
Ndị na-agagharị agagharị na ndị ọkwọ ụgbọ ala kwesịrị igosipụta nkwanye ugwu n'okporo ụzọ, ọkachasị mgbe oge ngwụsị dị nro gachara mgbe chi jiri iji chebe ndị mmadụ ka ha megaa ahụ.
E nyere ihe ncheta na usoro a ga-alọta na elekere asaa nke ụtụtụ wee rue elekere ise nke ụtụtụ echi; mmega kwere na 7 nkeji n'etiti 5 am na 90 pm Monday-Saturday .; osimiri ka nọ na mkpọchi mkpọchi siri ike ruo Fraịde, 5.15 Mee.
Ndị RCIPS ga - ewepụta mmelite kwa izu / kwa izu na mkpirisi COVID-19. Kọmịshọna ahụ kelere onye ukwu, onye Mịnịsta Ala na Mịnịsta maka Ahụike maka ndu ha n’oge a; ndị na-ege ntị / na-elele ọha na eze maka nkwado ha; obodo n'ofe Agwaetiti maka ndidi na nghọta ha; ndị nwoke na ndị nwanyị nke RCIPS na ndị ọrụ ibe na CBC, yana ụlọ ọrụ pụrụ iche na WORC ndị na-arụ ọrụ ogologo oge iji chebe Cayman Islands.
Usoro ikpe na Mgbakọ Iwu megharịrị Iwu Kwadoro nke tolọ iji nye ohere, n'okpuru nkwado nke Gọvanọ, maka nzukọ nzukọ ga-eme na Mgbakọ Iwu. Nke mbụ ga-eme echi ma nke a ga-agbasa ozi na-egosi na CIGTV.
A ga-atụle mmezigharị na Iwu ndị a n'oge nzukọ a, dịka ekwuputara na mbụ: Iwu okporo ụzọ, Iwu ezumike nka National, Omenala na Iwu Njikwa Iwu na Iwu Ọrụ.
Ọzọkwa, ,lọ ahụ ga-eme ntuli aka ịhọpụta onye nnọchiteanya ọhụrụ
Ndị hapụrụ agwaetiti tupu 1st February enweghị ikike iwepụ ihe mberede site na ego ezumike nka ha n'okpuru mmezigharị ọhụrụ ahụ. Ndị mmadụ na-eme atụmatụ ịhapụ ikike ga-ahazi ịnweta ego ezumike nka tupu ha apụ.
Ogbako a ga-eme maka echi agaghị eme ebe LA ga-anọ. (Lee akara ngosi ikpeazụ si n'aka Dr Lee n'elu.)
Ihe asatọ na nyocha gbasaa bụ ihe kpatara ị ga-enwe nchekwube, mana ekwesighi ịtụ anya nsonaazụ ruo Fraịdee.
Ọnụọgụ nke ikpe dị na agwaetiti Cayman, yana mmadụ ole na ole nọ n'ụlọ ọgwụ ma na -akọrọ ụlọ ọgwụ na-efe efe, bụ ihe ịrịba ama na-egosi na usoro dị ka ịkpa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, imechi oke na ule ike ike, ịchụ na ịkewapụ na-arụ ọrụ.
Mba UK bu uzo uzo nye ogwu ogwu; enwere ohere dabara adaba ọ nwere ike bụrụ mba izizi butere ọgwụ mgbochi.
Flightgbọ elu mgbapụ ọzọ na Miami ga-eme na Fraịdee, 1 Mee na 10.30 elekere nwere ike ịgba akwụkwọ ozugbo na Cayman Airways na 949-2311; ahịrị ga-emeghe ụbọchị izu ụka niile site na elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere isii nke ụtụtụ ma mepee akwụkwọ echi.
Flightgbọ elu a agaghị akpọta onye ọ bụla site na Miami ka ụlọ ọrụ ndị iche iche nọ na ikike ozugbo anabatara ndị si London.
Maka ndị njem na-atụ anya njem na ọdụ ụgbọ elu nke abụọ nke British Airways, njikọ akwụkwọ a bụ www.otairbridge.com/trips/london-repatriation.
Gbọ njem na London ga-apụ na Wenesde, 29 Eprel na 6.05 na mgbede, na-abịarute London Heathrow na Tọzdee, 30 Eprel na 11.35 ụtụtụ nwere nkwụsị dị mkpirikpi na Turks na Caicos Islands iji kpokọta ndị njem na-alaghachi London.
Biko kpọọ Office nke Gọvanọ na 244-2407 ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji anụ ụlọ gaa njem ụgbọ elu a.
Ndị London na-alọghachite ndị njem si London na Cayman, ndị London Office ga-akpọtụrụ ha, yana ndị njem kachasị mkpa a kpọtụrụ na nke mbụ, iji nye akwụkwọ ntinye ụgbọ elu na nkọwa ịkwụ ụgwọ. A ga-akpọtụrụ gị ma emechaa taa ma ọ bụ echi ma ọ bụrụ na akpọbeghị gị.
A na-ahazi ụgbọ elu ịkpọpụ ndị ọzọ dị ka ihe dị mkpa; mkparịta ụka na-aga n'ihu ma ọ dịkarịa ala gọọmentị anọ na ise mpaghara.
O kelere Brasserie maka inye ndị ọrụ ahụike Ọha na nri ehihie kwa ụbọchị, ma gosipụtakwa obi ekele nye ndị ọrụ CIAA na ndị mmekọ ha maka mbọ ha n’oge a. O chetakwara ọha na eze na Lands na Survey na-emeghe maka azụmahịa na ntanetị.
Ọ rịọrọ ndị ụlọ akụ ahụ ka ha nwee usoro nnweta maka ndị ahịa si East End, North Side na Bodden Town ma nyekwa ndokwa maka ajọ ọnọdụ ihu igwe.
Ọ mere ememme afọ 50 nke Earthbọchị Earthwa, ebe nde mmadụ jikọtara ọnụ iji chebe gburugburu ebe obibi na gburugburu ụwa ebe mgbanwe ihu igwe na-anọchite anya nnukwu ihe ịma aka maka ọdịnihu nke mmadụ.
O kelere otu dị iche iche site na ndị ọrụ nzuzo na nke ọha na eze dịka DOE, DEH, National Trust, Botanic Park, Plastic Free Cayman na Chamber of Commerce maka mbọ ha na ebe a.
O kwuputara na imegharị ihe ga-amalite ọzọ mgbe edozila okwu generator ma weghachite ike. DEH ka na-anakọta recyclables mgbe nhazi adịteghị nwa oge.